Safiirada Madrid jooga ayaa lagu casumay UNWTO Laaluush Cocktail ee Ritz: Yaa tagaya?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Safiirada Madrid jooga ayaa lagu casumay UNWTO Laaluush Cocktail ee Ritz: Yaa tagaya?
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dadka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Toddobaadkan Xoghayaha Guud ee UNWTO waxa uu dhammaan safiirada dalalka xubnaha ka ah ee laga aqoonsan yahay Spain ku martigelin doona hudheelka ugu qaalisan uguna qaalisan ee ku yaal Madrid-Ritz.
UNWTO waxay jeceshahay inay safiirrada ku laaluushto casho ama cabitaan - wayna tusinaysaa.
Zurab Pololikashvili, oo hadda ah xoghayaha guud ee Hay’adda Dalxiiska Adduunka ayaa tallaabo qaadi doona toddobaadkan, sida ay sheegayaan xog uu helay. eTurboNews ilaha
Bishii Janaayo waxay sidoo kale casho ku ahayd Madrid, markaa tani waa lambarka labaad.
Waa ayo danjirayaasha doonaya inay ka soo qaybgalaan dhacdadan oo kale oo ay maalgalisay Georgia ama UNWTO, oo sida cad loogu talagalay inay sugaan xaqiijinta Zurab Pololikashviliyo muddo xileedka Golaha Guud ee labaad
Munaasabadda si cad ayaa loo qaabeeyey, sidaa darteed danjirayaashu ma waydiin doonaan su'aalo ama ma taageeri doonaan cod qarsoodi ah Golaha Guud. Waxaan rajeyneynaa, liiska martida inuu soo daadan doono.
Goobta Madrid waa Ritz:
Mandarin Oriental Ritz, Madrid waa qasri qaali ah oo Belle Époque ah oo ku yaal Saddex Xagalka Dahabka ah ee Farshaxanka Madrid. In ka badan 110 sano, hoteelku wuxuu martigeliyay boqortooyo, marti-sharaf, iyo qaar ka mid ah marti-sharafta caanka ah ee adduunka. Hantidan cajiibka ah ayaa ah astaanta raaxada iyo heerka sare.
Iyadoo Golaha Guud ee UNWTO uu ka guuray Morocco una guuray Madrid daqiiqadihii ugu dambeeyay ayaa la filayaa in inta badan wadamada ka qaybgalaya shirka ay matali doonaan safiirada fadhigoodu yahay Madrid.
Tani waa faa'iido cad oo la xisaabiyay Zurab si uu u xaqiijiyo codkiisa dib u xaqiijinta. Zurab wuxuu ahaa safiirka Jamhuuriyadda Georgia ee Madrid dhowr sano wuxuuna yaqaan habka uu u dhex marayo bulshada diblomaasiyadeed.
Waxa uu horeba uga dhigay ka qaybgalka wasiirada dalxiiska mid adag oo qaali ah. Wadamada safaaradaha ku leh Spain waxay u badan tahay inay soo diri doonaan safiirada, wadamo badan oo kale ayaan la filayaa inay gabi ahaanba ka qaybgalaan.
Faa'iidada u leedahay Danjirayaasha in ay codeeyaan halkii ay ka ahaan lahaayeen wasiirada dalxiiska
Danjirayaasha ayaa aad ugu fudud in lagu qanciyo Xoghayaha Guud. Zurab waxa uu u baahan yahay in uu ka fogaado codsi sir ah si uu u xaqiijiyo dib u magacaabistiisa.
Wuxuu u baahan yahay inuu haysto aqlabiyadda 2/3 ee dalalka xubnaha ka ah ee u codaynaya dib-u-xaqiijintiisa.
Waxaa la yaab leh inta waddan ee xubnaha ka ah, oo aan awoodin inay iska bixiyaan wax-ku-qarankooda, quusna ka taagan yihiin kaalmo macna leh oo ka timaadda hay'adda Qaramada Midoobay, ayaa caloosha u gali doona falalkan xad-dhaafka ah.
Zurab wuxuu jecel yahay maaweelinta, waligeedna isagay u shaqayn jirtay.
Habeen ka hor inta uusan Golaha Fulinta u codeynin dib-u-doorashadiisa Madrid iyo tallaabo sir ah oo uu qaaday Ururka Dalxiiska Adduunka, casho loogu talagalay in lagu laaluusho 34 waddan ayaa lagu daray barnaamijka rasmiga ah ee doorashada UNWTO Janaayo 2021.
Cunto kariye caan ah oo reer Spain ah Dani García ayaa ku diyaarin doona cashada laaluushka ah ee Hudheelka Four Seasons Hotel ee Madrid oo uu ka soo qayb galay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Georgia.
Taasi waxay keentay in musharaxa kaliya ee la tartamaya Zurab uu aad uga xumaado oo meel walba ka dhaliyay sunnayaal. Musharaxa la tartamayey ee u dhashay dalka Baxreyn ayaan ka soo qeyb galin xaflada casho sharafta ah.
Sannadkii 2017-kii casho-sharafta ayaa lagu beddelay marti-qaadkii ergooyinkii codaynayey ciyaar kubbadda cagta ah oo la iibiyay, iyada oo ay qaddarinayso safaaradda Georgia ee Madrid.
UNWTO ayaa qarka u saaran inay laaluushto 34 wadan casho, Georgia…
UNWTO waxaa iska leh Xoghayaha Guud: Lumay…
Eedaynta Xoghayaha Guud ee UNWTO ayaa ka dhigaysa garsooraha…
Doorashada UNWTO waxay dishay wax kasta oo hufan oo ka haray…
Xushmad la'aanta UNWTO ee ka dhanka ah Baxrayn waa xad gudub JIU…
Geoffrey Lipman waxa uu ku baaqay in si hufan UNWTO…
Sida had iyo jeer, eTurboNews Waxay isku dayday inay ka xaqiijiso UNWTO, laakiin wax jawaab ah lagama helin. Bon Apetit!